﻿ ‘कृष्णदास यो देशको रामदेव बन्नुपर्छ’ : जगतगुरु बालसन्त (भिडियोसहित)
‘कृष्णदास यो देशको रामदेव बन्नुपर्छ’ : जगतगुरु बालसन्त (भिडियोसहित)
... अरु पनि मैले मान्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म सम्मान गर्छु । मैले मेरा शिष्यलाई शायद त्यती ममता राखिनँ होला । बराहक्षेत्रवासी साक्षी छन् । श्रद्धेय कृष्णदास महाराजलाई हातमा पक्रेर नेपालका कुना कुना पुर्याएर आजदेखि १० रुपैया चढाउँछौ भने कृष्णदासलाई ५ रुपैया र मलाई ५ रुपैया चढाओ भनेर आफैले हातमा पक्रेर कृष्णदास यो देशको रामदेव बन्नुपर्छ भनेर हिडाएँ ।
भारतमा रामदेव स्वामी बन्नुभयो । खै नेपालमा रामदेव ?
त्यसैले रामदेव स्वरुप कृष्णदास महाराजलाई सम्मान गर्न चाहन्छु ।
हाम्रो देशमा आयुर्वेदमा क्रान्ती गर्नुपर्छ ।
अरु क्रान्तीले शायद वहाँ सफल हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ । वहाँको सफलता आयुर्वेदमा छ । आयुर्वेद राष्ट्रको सम्पत्ती हो । हामी नेपालीहरुको अपेक्षा छ । जसरी पतन्जली ऋषिलाई सम्मान गर्छौं, कृष्णदासलाई एक दिन यो मुलुकमा नेपालको पतन्जली भएको हेर्न चाहने यी आँखा खडा छन् ।
वहाँको आन्तरिक साधना शक्ति कति छ, म जान्दिनँ । तर अपेक्षा गरौं, एक दिन यो देशको पतन्जली महापुरुष भएर चम्कनुहोस् मेरो बराह भगवानसँग प्रार्थना छ ।
केही व्यक्तिहरुले भने, बालसन्त कम्युनिष्ट विरोधी हो भनेर । राष्ट्रपति कार्यालयसम्म भन्न बाँकी राखेनन् । तर आजसम्म मेरा सहयोगी कुनै काँग्रेस थिएनन् । यहीँका कम्युनिष्ट थिए । अब बोल्ने बेला आएको छ । बालसन्त कम्युनिष्ट विरोधी हो थियो कि राष्ट्रको सम्मान गर्ने नागरिक थियो ? त्यो प्रश्नको उत्तर तपाइका टाउकामा छ ।
यी सबै कुरा मैले शिरमा बोकेको छु । कुम्भ नेपालको गौरव हो । म असल नागरिक हुँ । दुबिधा बोकेर हिड्नु छैन । सास हुन्जेल बराहक्षेत्रवासीको सम्मानका लागि हिडिरहन्छु ।
मैले नडराइसँग भारतसँग नझुकीसँग नेपालको स्वाभिमान उठ्नुपर्छ, आऊ भारतलाई भन्देको छु, हामीसँग १२ ज्योतिर्लिंग छ । कोही शास्त्रार्थ गर्न चाहन्छ भने आऊ मसँग काशी विद्वत परिषद् छ ।
करोडौं भारतीय विद्वानहरुले चार वर्षको मन्थनबाट नेपाल सरकारलाई पत्र पठाए । तिमीहरुको देशको बालसन्तलाई जगतगुरु बनाउन चाहन्छौ के भन्छौ भने ? त्यतीखेरका राष्ट्रपति रामवरण यादव, संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजालहरु काशी पुग्नुभयो । ६० जना विद्वानहरु जानुभयो । नेपाल सरकारले ताम्रपत्रमा कृतज्ञता पत्र काशी पुर्यायो । करोडौं नेपालीहरु इतिहासको पानामा गौरवान्वित भए र नेपालले जगतगुरु पायो । यसलाई साधारण नसम्झनुस् । यसले तपाइको हानी छ । इतिहासमा कालो दाग लाग्छ ।
(केही दिनअघि सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित चतरामा सुरु भएको अर्धकुम्भको उद्घाटनका अवसरमा जगतगुरु बालसन्त महाराजको मन्तव्यको एउटा अंश । बालसन्त महाराज र चतरामै आश्रम बनाएर बसेका अर्का जगतगुरु कृष्णदासजी महाराजबिचको तिक्तता घुमाउरो शैलीमा मन्चमै पोखिएको थियो । कृष्णदासजीले कुम्भ व्यवस्थित नभएको, आफूसँग सल्लाह नलिइएको, यत्रो वर्षमा पनि कुम्भ आयोजना गर्ने जगतगुरु बालसन्तको आश्रममा खासै प्रगति नभएको बताएका थिए । त्यसपछि बालसन्तले आफूले डोहोर्याएर कृष्णदासलाई आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याएको बताएका थिए । केही समयअघि चतरामै भएको तारकब्रह्म महायज्ञको समापनमा कृष्णदासजी जगतगुरु घोषित भएको खबर बाहिर आएको थियो । जगतगुरु बन्न लामो प्रक्रिया लाग्ने बताउँदै बालसन्तले आफू जगतगुरु हुँदाको प्रक्रिया बताएका थिए ।)